စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဧဝရတ်တောင်ထိပ်ကို တက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်မှန်း တောင်တက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးသူတိုင်း သိပါတယ်။. ဧဝရတ်တောင်ခြေစခန်းကိုရောက်ရင် ပျော်ပွဲစားထွက်တာတောင် မဟုတ်ဘူး။, ဒါပေမယ့် လူအများစုအတွက် ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုပါ။. နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။…
ပုံမှန်အသစ်တွင် သိထားသင့်သော အရေးကြီးသော ခရီးသွားအကြောင်းအရာများ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ Sunkissed ကမ်းခြေများ, ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးများ၊, သူ့မိသားစုနှင့် ပေါင်းသင်းသည်။ – Beth Ring သည် ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များကို ကုန်ဆုံးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။. ချီကာဂိုမြို့ခံတစ်ဦး, သူမသည် plush တွင် ရှစ်ရက်ကြာ ခရီးထွက်ရန် သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့် ကလေးငါးယောက်နှင့်အတူ ဂျမေကာသို့ ခရီးထွက်ခဲ့သည်။…
အားဖြင့် Jena Selter
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ နီပေါသည် လူတိုင်း၏ ရေပုံးစာရင်းတွင် မပါဝင်ပါ။, ဒါပေမယ့် ခရီးသွားတိုင်း နှစ်သက်ခံစားနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကို ပြောင်းလဲစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။. နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည်။, ဒါပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခရီးတစ်ခုပါ။, ပင်…